Amahhotela e-Chistye Prudy, eMoscow, eRussia: ukubuyekezwa, incazelo kanye nokubuyekezwa
UMoscow ungenye yemizi emikhulu kakhulu, ngakho-ke ensimini yayo kukhona inani elikhulu lamahhotela ahlukahlukene, amahostele kanye nezikhungo ezifanayo. Izinkulungwane zezivakashi ezivela emazweni ahlukene ziza lapha nsuku zonke, ezifuna ukuhlala eziyinkimbinkimbi zanamuhla, lapho konke kungenxa yokuchitha isikhathi esilula futhi esilinganisiwe. Kunezikhungo ezinjalo ezinhlokweni ezinkulu zaseRussia, ngakho-ke kunzima kakhulu ukuhlukanisa okuhle.
Namuhla sizoxoxa ngokuningiliziwe ngezinkampani ezithakazelisayo kakhulu nezithandwayo zehhotela eziseduze nesiteshini sesiteshi "Chistye Prudy", sifunda ngezibuyekezo zabo, amakheli aqondile kanye nolunye ulwazi oluwusizo. Ulungele ukuya eMoscow kakade? Manje ake siqale!
Le nkimbinkimbi yezokuvakasha ingenye yamahhotela e-spa athandwa kakhulu phakathi nenhloko yezwe lethu. Futhi ukuphawula ukuthi "i-Pokrovka" iyingxenye yenethiwekhi ethandwa kakhulu uMamaison. Kulesi simo, esiteshini sesitimela "uChrisye Prudy" ngeke uthole imizuzu engaphezu kwezingu-10 ngezinyawo.
Enye yezinzuzo zalolu kusungulwa yilezi zinhlobo zokudla nezindawo zokudlela ezikude. Ngesikhathi esifanayo, kunezinombolo zezitolo kanye nezinye izikhungo.
Akuwona wonke amahhotela e-"Amachibi ahlanzekile" anganikeza izivakashi zabo inkonzo enhle kakhulu nezangaphakathi zanamuhla. Amanani lapha, eqinisweni, angesabisa, kepha izinga elifanayo lenduduzo alikho ndawo elizohlinzeka.
Endleleni, le hotele ebizwa ngokuthi "Amachibi ahlanzekile" isendaweni ye-Pokrovka (indlu ka-40, isakhiwo sesibili).
Ukubuyekeza kanye nezinsizakalo
Isivakashi ngasinye sale hotele sinethuba lokuvakashela isikhungo se-spa, esine-studio yokufaneleka. Ngesikhathi esifanayo, iya ku-sauna noma echibini.
Kumele kuqashelwe ukuthi phansi kwesiteji sezokuvakasha kukhona indawo yokudlela enhle kakhulu, lapho wonke umuntu angazama khona izitsha ezihlukahlukene zamaRashiya nezaseYurophu. Ngendlela, futhi ensimini yeprojekthi yezokuvakasha kukhona ibha encane enezinketho ezinkulu zeziphuzo.
Kulezi zivakashi zokusungulwa eziza ngemoto yazo, kunezindawo ezimbili zokupaka lapha: zivulekile futhi zivaliwe. Bobabili abakhululekile.
Ngokuqondene nempendulo yezivakashi, zilungile. Izivakashi zephrojekthi zilinganisela ku-8.3 amaphuzu avela ku-10, futhi lokhu kuyinani eliphakeme kakhulu. Lapha, isevisi engacabangeli futhi engaphezu kwendawo yangaphakathi yanamuhla. Amanani aphezulu kakhulu.
Kulesi sigaba sokuthuthukiswa lesi sikhungo sinamakamelo amahle angama-84. Igumbi elishibhile liyi-junior suite, intengo yokuqasha okungama-ruble angu-8 000 ayi-850. Ngesikhathi esifanayo, kuphela ama-ruble angu-9 000 kuphela anamathuba okuqasha i-luxury deluxe deluxe. Ngaphezu kwalokho, i-Deluxe Suite nekamelo lokulala elilodwa lizokukhokhela ama-ruble ayizinkulungwane ezingu-10 nama-30, futhi okunye okulandelayo okunezindlu zokulala kuzobiza izindlu ezingu-18 000 zama-ruble.
Uma uthanda ukuphumula lapho yonke into iphelele, kufanele nakanjani uhlale enkampanini kaMengameli, intengo eqashisayo eyizinkulungwane ezingama-53. Ngendlela, isigaba se-VIP yikamelo elibi kakhulu lapha, ngakho-ke ungakwazi ukuqasha ama-ruble ayizinkulungwane ezingu-59.
Sicela uqaphele ukuthi isilinganiso samakamelo asibandakanyi ibhulakufesi. Ungayilawula ngokungeziwe ngama-ruble angu-1500 kuphela.
Le nkimbinkimbi yezokuvakasha iyisikhungo esithandwa kakhulu. Ihotela elithi "Na Chistye Prudy" (eMoscow, eRussia) lisendaweni yomlando yenhloko-dolobha futhi lihamba ngehora lesigamu elilodwa ukusuka ku-Red Square.
Igumbi ngalinye, elitholakalayo ukuqasha amahhotela, linendawo yokugezela, futhi lihlonyelwe konke okudingekayo ukuze uhlale ukhululekile, kuhlanganise ne-TV enekhebula le-TV.
Ngesikhathi esifanayo, imizuzu emithathu nje ukuhamba kusuka enkampanini yezokuvakasha kukhona izindawo zokudla nezindawo zokudlela, lapho ungazama khona izinhlobo ezihlukahlukene zezobuciko ezivela emhlabeni wonke. Ngendlela, esiteshini sesitimela "uChrisye Prudy" atholakala kuleli hotele ngamaminithi amahlanu kuphela ngezinyawo. Ngaphezu kwalokho, amakhilomitha amabili ukuya esiteshini sesitimela saseLeningrad.
Sicela wazi ukuthi ukusungulwa kuseKostiansky Lane (indlu 13).
Inani lamakamelo nezibuyekezo
Amaningi amaningi ku "Amachibi ahlanzekile" asinamakamelo amaningi, kodwa kulokhu ungahlala kwenye yezingu-50 ezitholakalayo ukuqasha. Leli hotela liyinkimbinkimbi yezokuvakasha, ngakho-ke lapha ungakwazi ukuhlala ekamelweni lesigceme kabili ngaphandle kwamafasitela anombhede owodwa ngama-ruble angu-1 000 kuphela. Ngesikhathi esifanayo uqasha igumbi elijwayelekile elilodwa elilodwa nombhede owodwa uzothola ama-ruble angu-1500.
Ngaphezu kwalokho, izindleko zokuphila kwansuku zonke endlini yokulala ejwayelekile ejwayelekile nemibhede emibili ehlukene yi-ruble engu-1800. Futhi ungaphumulela ku-suite yama-rubles angu-2200 kuphela. Ngendlela, futhi ungaqasha igumbi elibili elikhululekile nombhede owodwa ngama-ruble angu-2 000. Noma ikamelo eliyingxenye yesithathu lemali elilinganayo.
Lesi sikhungo siyindawo enhle kakhulu yehhotela e-Chistye Prudy, lapho noma ubani angahlala kwelinye lamahhala angu-8 akhululekile. Ikamelo ngalinye lehhotela lihlonyelwe konke okudingekayo ukuze kube khona isikhathi sokuzijabulisa. Ngaphezu kwalokho, zonke izivakashi zehhotela zithola ama-slippers, ama-toilette kanye nesambatho sezinwele mahhala.
Izindleko zokuqasha lapha ziyamukeleka - kusuka kuma-ruble angu-2400. Ikamelo elilodwa elinombhede owodwa kuya kuma-ruble angu-4500. Ikamelo elifanayo lokubekwa kathathu.
Ukubuyekeza mayelana nalesi siteshi sezokuvakasha kulungile. Amakhasimende anelisekile ngamanani, nesevisi, nangaphakathi. Ngendlela, leli hhotela elincane liseKhistoprudniy Boulevard (indlu ka-21, u-2 ngomnyango, isitezi sokuqala).
Futhi ekugcineni, masihambe ezindaweni ezifudumele zaseRussia futhi sixoxe kafushane ngehotela lomuzi "i-Velvet Seasons": ikota "uCistye Prudy". Lena ngempela yinkimbinkimbi ye-chic!
"Izikhathi ZaseVelvet" (Adler, Sochi)
Awekho amahhotela "Emanzini ahlanzekile" angeke akwazi ukuncintisana nale nkimbinkimbi. Lapha ungalalisa amakamelo angu-1 000 angu-146, ngakho-ke leli hotele lingabizwa ngokuthi idolobha.
Noma ubani angavakashela ibhishi lendawo, okuyimigqa emi-3 kuphela. Futhi endaweni enzima kunesikhungo sokufaneleka kulabo abangakwazi ukuhlala ngaphandle kwemidlalo.
Ukubuyekeza kwalokhu kuyinkimbinkimbi kuhle: amakhasimende ayilinganisa ku-7.5 amaphuzu avela ku-10. Lesi sakhiwo sise-Adler kuleli kheli elilandelayo: Amakholwa amadala emgwaqweni, indlu ka-66.
Ngakho sixoxisane ngamahhotela angcono kakhulu futhi athakazelisayo kakhulu ku-"Amachibi ahlanzekile", kanye nemaminithi ambalwa adluliselwe eSochi futhi akhuluma ngesakhiwo esikhulu sezovakashi lapho. Ukuphumula okujabulisayo nomoya omuhle!
Iberostar Mehari 4 * (Tunis, Djerba): incazelo kanye nokubuyekezwa
Midia Grand kuyona 3 *: incazelo ihhotela
Umkhaya wasebukhosini eBrithani isinqumo kukhethwa esikoleni ngoba umlandeli wakhe
Uyini BIN ngabanye usomabhizinisi?
Le filimu "The Reader": ukubuyekezwa, abadlali kanye izindima
Powder futhi ukhilimu "collagen Ultra": ukubuyekezwa kanye nekghono
"NoHorus" - fungicide: ukubuyekezwa, yokusetshenziswa